On July 3, 2019, atọ 40-ụkwụ containers e ọma Ẹnam ekese si Shanghai n'isi ụlọ ọrụ nke kaiquan otu ho chi minh ọdụ ụgbọ mmiri, Vietnam, na-akanye a ọhụrụ isi itunanya na esenidụt ahịa nke kaiquan otu, a na-eduga enterprise na mmiri mgbapụta ụlọ ọrụ .
Dabere na atụmatụ atumatu otu na mmụọ nke ntuziaka Onye isi ala Lin, ngalaba na-ahụ maka azụmahịa na ofesi ga-emejuputa usoro mmekọrịta n'aka na 2019. N'ime ọnwa ole na ole, ọtụtụ ndị mmekọ si mba ofesi abanyela na nkwekọrịta kaiquan. N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị ọrụ dị ike na ụlọ ọrụ kaiquan abanyela nnukwu iwu. Site na mbọ niile ndị ọrụ ibe gị na ngalaba azụmahịa na mba ofesi, anyị mechara mịa mkpụrụ osisi bara ọgaranya n'oge ọkọchị a!
Ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ndịda Vietnam na-ebu ibu, ngụkọta okwu 626, gụnyere stampụ igwe anaghị agba nchara, mmiri mgbapụta mmiri mmiri na otu mgbapụta nke centrifugal, usoro ngwaahịa niile nwere nkọwa, oge nnyefe dị mkpirikpi, na njirimara nke ogo dị elu, iji mechaa usoro a, yana ezigbo mma na otu ụlọ ọrụ na ngalaba isii, ụlọ ọrụ hefei na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na mpaghara zhejiang site na nkwado sitere na ndị isi na ndị ọrụ ibe, ngalaba niile iji pụọ, jiri nlezianya hazie mmepụta, ọkachasị ndị ọrụ ibe mbụ na-ebute ụzọ na-arụ ọrụ oge, na-akpachapụ anya na nhazi, na-etinye njikọ dị mkpa nke nyocha ngwaahịa na mbukota, mgbe otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na ngalaba ọ bụla, mmezu nke ọma nke usoro a, abụla nke ukwuu toro ndị ahịa na Vietnam.
Deliverynyefe usoro a bụ naanị mmalite dị mma maka ịkọ ahịa nke mba ofesi na mmepe nke ndị ọrụ igodo nke esenidụt. Kaiquan ga-eburu n'uche ebumnuche ya ma gbalịsie ike ịmepụta ụwa sara mbara na mmepe nke ahịa mgbapụta nke mba ofesi.